Yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga ne-Stimulus Jonga umjikelo wesibini (e-USA 2020) | XperimentalHamid
Yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-Stimulus Jonga umjikelo wesibini (e-USA 2020)
Kule post ingcaciso siza kukubonelela ngolwazi malunga nomjikelo wesibini wePakheji ye-Stimuls. Esi sithuba senkcukacha siza kuphendula imibuzo yakho malunga nokuhlawulwa, imfuneko yephakheji yokunyusa, ulwazi malunga nomjikelezo wesibini wepheyini ye-Stimuls.
Funda inqaku elipheleleyo kwaye ufumane ezinye iinkcukacha, ndwendwela amakhonkco aluncedo anikezwe ekugqibeleni ukuze ufumane ulwazi ngakumbi.
Ekupheleni kuka-Matshi Congress yapasisa umthetho kamva owasayinwa nguMongameli uTrump, kwagqitywa iphakheji ye- $ 2.2tn eyayiza koyisa ezinye zezoqoqosho ngenxa yobhubhani weCOVID-19.
Iphakheji yokukhuthaza urhulumente ibandakanya iitsheki ezixabisa ukuya kuthi ga kwi-1,200 yeedola ukunceda umvuzo ophantsi okanye abantu abanemivuzo echatshazelwe bubhubhani be-coronavirus.
Umjikelo wokuqala woncedo lwepakeji yephosta wafakwa ngqo kwiakhawunti zabantu ababesele benikezele nge-IRS ngolwazi olufunekayo.
Nangona kunjalo, izigidi zisalinde ukufumana imali kwaye zilinde umjikelo wesibini wephakheji yokunyusa.
Yintoni uHlaziyo loShukumiso?
Uvuselelo luqala nini umjikelo wesibini?
Yeyiphi indlela efanelekileyo yokuvavanya iStusus kumjikelo wesibini?
Ngaba iphakheji yesibini yovuselelo yesibini iyafuneka e-USA?
Kutheni ndingakhange ndifumane iStimulus Check yam?
Ngubani ongazukufumana i-stimulus Check kumjikelo wesibini?
Ixabisa kangakanani iphakheji ye-Stimulus 2020 kumjikelo wesibini uxabisa?
I-edsource iza kufumana malini iikholeji?
Ndingalujonga phi uhlobo lokujonga ukhuthazo?
Ungayiphepha njani imikhonyovu ngexesha lovavanyo lokutshekisha?
Ulwazi oluthe kratya malunga nokuhlawula iStimulus
Amakhonco afanelekileyo ukwazi ngakumbi ngomjikelo wesibini wePakheji ye-Stimulus kunye neemfuno zayo
Imibuzo malunga nokufumana intlawulo?
Khange ufake fom yokubuya ngo-2018 okanye ngo-2019?
Fumana ulwazi oluthe kratya malunga neNtlawulo yeMpembelelo kuqoqosho
Ngamafutshane, yiphakheji yoncedo evela kwi-GOVT yase-USA ngengeniso ephantsi nabantu abanemivuzo echatshazelwa yi-COVID-19 ukubanceda ngezemali kweli xesha linzima.
Ngaphandle komjikelo olandelayo wokukhutshwa kwemali, amathuba anokunyanzeleka ukuba alinde iinyanga ngaphezulu ukuze afumane intlawulo.
Abemi baseMelika abangakhange bagcwalise imbuyekezo, ebandakanya amagqala, abathathe umhlala phantsi, kunye nabantu abadla umhlala-phantsi kungafuneka balinde ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintlanu njengoko iKomiti yeNdlu ngeendlela kunye neendlela zithelekelelwa.
Abemi base-US, abahlali abasisigxina okanye abaphambukeli abafanelekileyo baya kufumana i-Economic Impact Payment ye- $ 1,200 kumntu ngamnye okanye iintloko zeefayile zekhaya, kunye ne- $ 2,400 yokufaka iifayile ngokudibeneyo ukuba abaxhomekekanga komnye umrhafi kwaye banomsebenzi ofanelekileyo woKhuseleko lweNtlalontle uhlengahlengisiweyo. Ingeniso yexabiso liphela:
I- $ 75,000 yomntu ngamnye
$ 112,500 yentloko yabasebenzi bekhaya kunye
I- $ 150,000 yesibini esitshatileyo sokugcwalisa imbuyekezo edibeneyo
Abarhafi baya kufumana intlawulo encitshisiweyo ukuba i-AGI yabo iphakathi:
I- $ 75,000 kunye ne- $ 99,000 ukuba imeko yabo yokufayila yayingatshatanga okanye itshatile yagcwaliswa ngokwahlukeneyo
I-112,500 136,500 kunye ne-XNUMX XNUMX yeedola kwintloko yekhaya
I- $ 150,000 kunye ne- $ 198,000 ukuba inqanaba lokufayilisha kwabo babetshatile ngokudibeneyo
Isixa sentlawulo esincitshisiweyo siya kusekelwa kwirhafu ethile ehlawulelweyo yomrhafi.
Abathathe umhlalaphantsi abafanelekileyo kunye nabamkeli boKhuseleko lweNtlalo, umhlala-phantsi koololiwe, ukukhubazeka okanye izibonelelo zamagqala kunye nabarhafi abangafumani mali yaneleyo ukuba baqhele ukubuyisa irhafu bayakufumana intlawulo. Oku kubandakanya abo bangenayo ingeniso, kunye nabo banomvuzo ovela ngokupheleleyo kwiinkqubo ezithile zesibonelelo, ezinje ngeZibonelelo zeNgeniso yoKhuseleko.
Abathathe umhlala phantsi abafumana umhlala-phantsi woKhuseleko lweNtlalontle okanye izibonelelo zokuthatha umhlala phantsi kwisitrato baya kufumana iintlawulo ngokuzenzekelayo.
Ukulungela ukuhlawulwa kwe- $ 2,000 yenyanga nganye phantsi kweMali kaRhulumente engxamisekileyo kuya kuba banzi kakhulu kunezo ntlawulo zokhuthazo zangoku zeCARES. Ukuze ulungele ukuhlawulwa rhoqo ngenyanga phantsi kwetyala, kuya kufuneka:
Ubumi okanye umhlali wase-US
Ubuncinci uneminyaka eli-16 ubudala ukusuka nge-1 kaJanuwari, 2020.
Ubumi okanye iimfuno zokuhlala ziya kwaneliswa ukuba umntu ubakhona ngokwasemzimbeni e-US ngokuqhubekayo ukusukela ngoJanuwari 27, 2020, kwaye uhlala e-US ngalo lonke ixesha lokuhlawula. (Umntu uya kusilela ukugcina ubukho obuqhubekayo e-US ukuba ulishiya eli lizwe ngalo naliphi na ixesha elingaphezulu kweentsuku ezingama-90 okanye nangaliphi na ixesha, kumphondi, kudlula iintsuku ezili-180.)
I-WalletHub ivavanye abantu baseMelika abangama-350 kwaye yafumanisa ukuba iipesenti ezingama-84 ifuna isheke yokuvuselela yesibini kwaye ingaphantsi kwesiqingatha sabo baphendulileyo bathi bafuna imali yokuhlawula iziseko ezinje ngokurenta okanye ukubambisa ngemali njl.
Idatha ye-SimplyWise ifumanise ukuba iipesenti ezingama-63 zabaphenduli bathi bangadinga olunye ukhangelo lokukhuthaza ngaphambi kwehlobo. Uvavanyo lwayo "lufumanise ukuba iipesenti ezingama-40 zabantu baseMelika ingeniso yabo ichaphazelekile (ilahlekile okanye incitshisiwe) yi-coronavirus.
Ukujonga iziphumo zolu phando zombini kufuneka kubekho umjikelo wesibini weStimulus Check ukunceda abantu abangakumbi ukufumana ukuba iziseko zizalisekisiwe.
Ukuba ugcwalise iifom zakho zerhafu ka-2018 okanye ka-2019 kwaye sele yenziwe, unokujonga imeko yakho usebenzisa eli khonkco inqanaba lentlawulo lwempembelelo yakho yezoqoqosho.
Isicelo sokufumana iNtlawulo yam siya kubuya "Imeko yokuhlawula ayifumaneki" ngenxa yezizathu ezininzi, kubandakanya:
Uyacelwa ukuba ufake ifayile yokubuyisa, kodwa:
I-IRS ayigqibanga ukuqhubekeka nembuyekezo yakho ka-2019
Isicelo asikabinayo idatha yakho; sisebenza songeza idatha ngakumbi ukuvumela abantu abaninzi ukuba bayisebenzise.
Awuhlali ufaka ifayile yokubuyisa, kwaye:
Usebenzise iiFayile-ekungafakwanga kuzo: Ngenisa Intlawulo yolwazi apha kodwa asikalungeli ukungena kwakho okwangoku
Ufumana ifom ye-SSA okanye i-RRB kwi-1099 okanye kwi-SSI okanye kwi-VA; Ulwazi alukhange lufakwe kwiinkqubo zethu okwabantu abangaqhele ukwenza ifayile yokubuyisa.
Awufanelanga ntlawulo (jonga ukuLungela).
Nangona ezinye iifayile, ezinje ngeefayile ezinengeniso ephezulu, aziyi kulungelwa ukuhlawulwa ngeempembelelo zoqoqosho, uninzi luya kuyenza.
Abarhafi abanakulungela ukuhlawulwa kweMpembelelo yezoQoqosho ukuba kukho oku kulandelayo kuyasebenza:
Ingeniso yakho evunyiweyo yomvuzo mkhulu kunokuba;
I- $ 99,000 ukuba imeko yakho yokufayilisha yayingatshatanga okanye itshatile yagcwalisa ngokwahlukeneyo
$ 136,500 yentloko yekhaya
$ 198,000 ukuba imeko yakho yokufayilisha yayitshatile ngokugcwalisa ngokudibeneyo
Unokufakwa ibango lokuxhomekeka kwimbuyekezo yomnye umntu. Umzekelo, oku kuya kubandakanya umntwana, umfundi okanye umdala osele ekhulile onokubangwa xa ebuya ngumzali.
Awunayo inombolo esebenzayo yoKhuseleko lweNtlalo.
Ifayile ye-1040-NR okanye iFom 1040NR-EZ, iFom 1040-PR okanye iFom 1040-SS ka-2019.
Abantu abafanelekileyo abanengeniso eqokelelweyo yengeniso ukuya kuthi ga kwi-75,000, 112,500 yeedola, iifayile ezili-150,000, 1,200 zentloko yefayile yekhaya kunye ne- $ 2,400 yokufaka iifayile ngokudibeneyo bafanelekile ukuba bazifezekise iidola ezili-500 zabantu kunye ne- $ XNUMX yokufaka iifayile ngokudibeneyo. Ukongeza, banelungelo lokufumana i-XNUMX yeedola kumntwana ngamnye ofanelekileyo.
Kwabafakiweyo ngengeniso engaphezu kwezi zixa, imali ehlawulwayo iyancitshiswa yi- $ 5 ngeedola ezili-100 ezingaphezulu kwe- $ 75,000 / $ 112,500 / $ 150,000 $. Iifayile ezizodwa ezingeniso ezingaphezulu kwe- $ 99,000, $ 136,500 198,000 yeentloko zeefayile zekhaya kunye ne- $ XNUMX yabadibaniseli beefayile ngaphandle kwabantwana abafanelekanga kwaye abayi kufumana ntlawulo.
Umthetho wokukhuthaza ubumbano ubandakanya iidola ezili-14 lamawaka ezigidi ukunceda kwimfundo ephezulu kubandakanya iidola ezisisi-1.7 samawaka ezigidi ukuya kwiikholeji zaseCalifornia kunye neeyunivesithi ukunceda amaziko kunye nabafundi ukujongana nefuthe lobhubhani lwe-coronavirus. Izikolo ziyacelwa ukuba zichithe okungenani isiqingatha sokwabelwa kwazo izibonelelo zoncedo olungxamisekileyo kubafundi.
Itotali yemali iikholeji ziya kuyifumana isekwe kwinani labamkeli bakaPell Grant ababhalisiweyo kwizifundo zabo.
Ungasebenzisa indawo esemthethweni ukukhangela imeko yokuhlawula kwaye ufumane intlawulo usebenzisa eli khonkco
Iwebhusayithi iya kukunika ulwazi malunga;
Inqanaba lakho lokuhlawula
Uhlobo lwakho lokuhlawula
Nokuba ngaba i-GOV ifuna ulwazi ngakumbi kuwe, kubandakanya ulwazi lweakhawunti yebhanki
Izizathu zokuba unokufumana ukuba "imeko ayifumananga";
Fumana Intlawulo yam iyakubuyisa ukuba "imeko yokuBhatala ayifumaneki" ukuba:
Isicelo asikabi nayo idatha yakho, okanye
I-IRS ibongoza abahlawula irhafu ukuba babeke iliso kwii-scam artists bazama ukusebenzisa iintlawulo zempembelelo zoqoqosho njengesixhobo sezikimu zokutsiba ulwazi lomntu kunye nemali. Khumbula, i-IRS ayizukutsala umnxeba, ikuthumelele imiyalezo, ikuthumele i-imeyile okanye ikufowunele kwimithombo yeendaba zentlalo ikucela ulwazi lobuqu okanye lweakhawunti yebhanki- nokuba inxulumene nentlawulo yefuthe lezoqoqosho. Kwakhona jonga ii-imeyile kunye nezinamathiselo okanye amakhonkco amabango anolwazi olukhethekileyo malunga neentlawulo zempembelelo yezoqoqosho okanye imbuyiselo.
utyelelo Fumana intlawulo yam Iphepha leMibuzo ebuzwa rhoqo ukuphendula imibuzo yakho malunga nokusebenzisa usetyenziso, ukufaneleka, iimali zokuhlawula, kunye nokunye.
Ukuba uneemfuno zokufayilisha kwaye awukafaki fayile yokubuyisa kwirhafu yonyaka ka-2018 okanye ka-2019, kufuneka ufake ifayile yokubuyisa ka-2019 ukuze ufumane intlawulo.
Ukuba awunyanzelekanga ukuba ufake ifayile yokubuyisa ka-2018 okanye ka-2019, tyelela ii-non-fileers: Ngenisa ulwazi lwentlawulo Apha.
Funda nzulu Apha
utyelelo IZiko loLwazi lweeNtlawulo zeMpembelelo kuqoqosho Ukuphendula imibuzo yakho malunga nokufaneleka, iimali zokuhlawula, into onokuyilindela, ixesha onokulindela ngalo, kunye nokunye.
iindidi Finance Personal Post yokukhangela
Khuphela Simahla Ukukhuphela umboniso bhanyabhanya kwi-HD